Dhaliil Fudud | Martech Zone
Axad, Febraayo 18, 2007 Douglas Karr
Garashada mararka qaarkood waa xaqiiq.
Feb 18, 2007 markay ahayd 1:59 PM
Mahadsanid. Waxaan jeclahay cambaareyn waxqabad leh, taasi wax ma baabi'iso.
Feb 18, 2007 markay ahayd 2:02 PM
Taasi waa qodob fiican, Martin! Anigu taas tixgelin kamaan qaadin laakiin waan ku raacsanahay gabi ahaanba.